किन आउँछ डण्डीफोर ? यस्तो छ कारण…. – Suchana Hub
किन आउँछ डण्डीफोर ? यस्तो छ कारण….
काठमाण्डौ । कुनै पनि मानिसको लागी उसको अनुहार सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । आफ्नो अनुहारलाई सफा राखिराख्न मानिसहरु विभिन्न विधिहरु अपनाउने गर्दछन् । तर पनि समय समयमा मानिसको अनुहारमा विभिन्न किसिमका फोहोरहरु आइदिन्छ जसले मानिसलाई निकै चिन्तीत बनाउँछ । त्यस्तै एक हो डण्डीफोर । छालामा हुने एक विशेष प्रकारको तैलीय ग्रन्थिका कारण अनुहारमा डन्डिफोर आउने गर्छ । यो ग्रन्थिले एक प्रकारको चिल्लो पदार्थ पैदा गर्छ भने छालालाई प्राकृतिक रूपमा कोमल राख्न मद्दत गर्छ । हुन त डण्डिफोरले बुढापाकालाई पनि छाड्दैन तर, यसले विषेश गरी युवावस्थाका युवायुवतीले बढी पिरोल्ने गर्छ ।
डण्डीफोरको प्रभाव स्वरूप सुरुमा हल्का दाग– धब्बाजस्तो देखिन थाल्छ र बिस्तारै धेरै चिल्लो उत्पादन हुन थालेपछि रौँका छिद्र पनि चौडा हुन थाल्छन् । त्यसपछि बिस्तारै त्यो दाग गाढा हुन थाल्छ । यसले रौँको छिद्र बन्द गरिदिन्छ र त्यसपछि छि* द्रकै मुखमा गाढा दाग कडा आवरणमा देखिन थाल्छ जसलाई ‘ह्वाइट हेड’ भनिन्छ । ह्वाइट हेड हावाको स *म्पर्कमा गएर अक्सिजनसँग संर्ग हुँदा बिस्तारै कालो हुन थाल्छ र आसपासको छालाको तन्तुमा विकार उत्पन्न गराएर पीडा पैदा गर्छ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
त्यहि भागमा बिस्तारै डन्डिफोर बन्न थाल्छ । यस्तै गरि गर्मी महिनामा डण्डीफोरले थप दुः ख दिने गर्छ । यसले अनुहारको सुन्दरतालाई बि गार्नुका साथै मानिसको आत्मविश्वासमा समेत कमी ल्याउने गर्दछ । अनुहारमा डण्डीफोर आउँदा मानिसले अरु सामु पार्न पनि असहज महसुस गर्न थाल्छन् । औषधीको प्रयोग गरेर केहि समयमै डण्डीफोर त बिस्तारै हटेर जान्छ तर यसले सधैका लागि अनुहारमा दाग पनि छाडेर जान्छ जसले अनुहारलाई नराम्रो बनाउने गर्छ । डण्डिफोरको दाग हटाउन निकै नै गाह्रो हुन्छ भने कतिपय दा* ग त सदाकै लागी बस्दछ ।
Previous भुल्ने बिमारी छ? यसरी गर्नुहोस् दिमागको अभ्यास :
Next ट्राफिक प्रहरीमा कोरोना पुष्टि भएपछि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा सिल, यस्तो छ अवस्था :